UwuNgxelo njani uMxholo weMfihlo yeMultimedia? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Kwiqonga le-Twitter, ukuba uMsebenzisi ujonga iifoto kunye nevidiyo KwiiTweets ocinga ukuba maziphathwe njengeMfihlo, ngokwePolisi yeMxholo yeMultimedia yeTwitter, unoxanduva kunye nelungelo lokunika ingxelo kuTwitter.
Umsebenzisi, ukuya khalaza Iifoto kunye neevidiyo kwiiTweets, kuya kufuneka: Khangela iTwitter ofuna ukuyenza ingxelo ku-twitter.com okanye kwisicelo se-Twitter se-iOS okanye i-Android, cofa; khetha i-Report Tweet, cofa; khetha leTwitter iqulethe umfanekiso oyimfihlo, cofa.
Kwinethiwekhi yoluntu iTwitter iingxelo ze Iziqulatho zemultimedia iphawulwe ngaBasebenzisi ukuba bacacise ukuba ngaba bafuna umyalezo wesilumkiso ukuba bathobele imiGaqo-nkqubo yesiqulatho seMultimedia ye-Twitter.
Lawula ukuJongwa kweefoto eziyimfihlo kunye neeVidiyo kwiiTweets
Ukuba uMsebenzisi we-Twitter unomdla wokuhlengahlengisa useto lwakhe Iifoto kunye neeVidiyo kwiiTweets; Kuqala, kufuneka ungene ku-twitter.com, intloko ngaphezulu ukuze ubone imiyalelo ngokukhetha i-icon yakho ye-PC kwaye uyilandele.
Ngokwemiyalelo, uMsebenzisi we-Twitter: Khangela indawo imenyu yokuhamba okanye i icon yeprofayile yakho, khetha useto kunye nemfihlo, cofa; Kwimfihlo nakukhuseleko, cofa; khetha Ukhuseleko, cofa; kwaye ukhethe Veza iifoto kunye nevidiyo ezinokugcina ulwazi oluyimfihlo, gcina.
Kugqityiwe inkqubo, kunye noMsebenzisi wazise iqonga I-Twitter inxulumene noMxholo onjalo. I-Twitter iya kuyifaka iflegi, kodwa awuyi kufumana umyalezo osisilumkiso okanye uzisuse ngokuzenzekelayo kwiwebhusayithi. Kulindeleke ukuba irhoxiswe ngumbhali wayo.
Amava akho kuTwitter
I-Twitter ibonelela ngoMsebenzisi indawo efanelekileyo ukwabelana ngemibono kunye nolwazi lwehlabathi; Ngesi sizathu, eli qonga lithembisa izixhobo zokulawula oko kubonwa ngumsebenzisi we-Twitter kunye nokubona abanye abantu ngoMsebenzisi.
Ukuze uMsebenzisi akwazi ukuvakalisa ngokuzithemba Kwi-Twitter, kuya kufuneka ujongane namanyathelo ngokunxulumene ne-Tweet, enje: Ngokucofa phezulu kweTwitter oyifunayo, ukufikelela kukhetho olunikezelwa yi-Twitter ngokuthe ngqo kumhla wakho wokuqala wexesha.
Ezi ukhetho luthunyelwe a: Yeka ukulandela, izaziso zokucoca, bonisa kancinci, isimumu, ibhloko, ingxelo, ukhethe ukuba yeyiphi imixholo yemultimedia ofuna ukuyibona kwiiTweets eqongeni.
Ulawula njani abanye abasebenzisi ngokundibona ku-Twitter?
Abasebenzisi be-Twitter banezixhobo ezahlukeneyo kunye nezinto abanokuzithembisa nge-Twitter; Ngayo, umsebenzisi we-Twitter uyakwazi ukulawula abanye abantu babona ntoni ngaye kwiincoko, kwintsebenzo, njl.
Ukulawula, uMsebenzisi uyacetyiswa khusela iiTweets zakho, ngabalandeli bakho kuphela abaya kuyibona; tag iifoto, uthathe isigqibo sokuba uvumela nabani na ukuba afake iifoto zakho, ngabahlobo bakho kuphela okanye akukho basebenzisi be-Twitter; ukubonakala, tshintsha useto lweAkhawunti ukuze ingabonakali.
Umsebenzisi angagqiba ukuba yabelana ngendawo yakho kwiiTweets; I-Twitter ikunika ukhetho lokukhetha kwiTweet nganye ukuba ufuna ukufaka indawo okuyo; Apha kuya kufuneka uthathele ingqalelo amathuba okungazi bonke abalandeli bakho, kufuneka ulumke.
1 Lawula ukuJongwa kweefoto eziyimfihlo kunye neeVidiyo kwiiTweets
2 Amava akho kuTwitter
3 Ulawula njani abanye abasebenzisi ngokundibona ku-Twitter?